देशको प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले आफ्नो सुरक्षाका लागि जाबो १५ लाखको हतियार किन्दिनु के ठूलो कुरा भइगो र ??
हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री यतीबेला चाहिँ सच्चा सर्बाहारा बन्नु भएछ । भको त्यही ३ तोला सुन र एक कठ्ठा जमिन बेचेर आको २० लाखबाट १५ लाखले अप्ने लाड्ले बेटेलाई एउटा राइफल किन्दिनु भएको भन्ने कुरो आयो ! अनि बचेको ५ लाख चाहिँ अब आउनै लाको चुनावका लागि सुरक्षितसंग राख्नु भा छ रे ।
अब देशको प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले आफ्नो सुरक्षाका लागि जाबो १५ लाखको हतियार किन्दिनु के ठूलो कुरा भइगो र ! आफ्नो सुरक्षाको जिम्मा आफ्नै छोरालाई दिएसी उनैले त बोक्ने भए केरे त्यो बन्दुक ! बेक्कारमा प्रमज्युलाई बदनाम गराउन मिडिया अनेक प्रचारबाजी गर्दै बस्छन यार 😂 । बरु हाम्रा प्रम साच्चिकै सर्बहारा भए भनेर अलिक हुने कुराको प्रचार गरौं न हौ मिडियाका साथीहरुले ।